छारे रोगका भ्रम- विविधा - कान्तिपुर समाचार
जेष्ठ ९, २०७५ डा. रागेश कर्ण
काठमाडौँ — एक किशोरीलाई अचम्मको रोग लाग्यो । उनी अचानक बेहोस हुन्थिन्, हातखुट्टा फलाम जस्तै कडा भई केहीबेर बिजुलीको करेन्ट लागेझैं हल्लिन्थिन्, सँगसँगै उनको मुखबाट फिँज आउने, कहिले जिब्रो टोकिने र दिसा–पिसाब छुट्ने गर्थ्यो ।
कहिलेकाहीं त उनलाई थाहा नपाईकन एउटै वस्तुमा हेरेको जस्तो हुन्थ्यो त कहिले आफ्नै सुरमा हाँस्ने गर्थिन् वा घरबाट निस्केर केही टाढासम्म पुग्थिन् जसको अनुभूति उनले पाउँदिनथिन् । गाउँका केही मान्छेले उनलाई भूत लागेको भन्न थाले भने केहीले त यो बौलाहा रोग भने । यो पूर्वजन्मको फल भन्नेहरू पनि थिए । यो समस्याले परिवारमा ठूलो तनाव सिर्जना गर्‍यो । यो कुरा अरूले थाहा पाए भने उनको विवाहलाई समस्या पर्ला भनेर कुरो लुकाउन थालियो । बेला–बेला बाँधेर राख्न थालियो । झारफुक पूजापाठ गरिए पनि समस्या हटेन । गाउँकै एक जनाको सल्लाहअनुसार अस्पताल लगियो । त्यसपछि मात्र उनलाई छारे रोग लागेको भन्ने थाहा भयो । अलि ढिलो भइसकेको हुनाले उनको समस्या पूर्णत: नियन्त्रणमा आउन केही महिना लाग्यो । उनी सामान्य जीवन बिताइरहेकी थिइन् । उनी मकहाँ नियमित परामर्शमा आइरहन्थिन् । उनको बिहे भयो । उनको रोगबारे पछि केटा पक्षले अरू आफन्तबाट थाहा पाए । त्यसपछि सँगै बस्दा, खाँदा रोग परिवारका अन्य सदस्यलाई पनि सर्न सक्छ भन्दै सम्बन्धविच्छेद हुने अवस्था आयो । मैले श्रीमान्, श्रीमती दुवैलाई बोलाएर रोगसम्बन्धी जानकारी दिएर सामाजिक भ्रम हटाइदिएपछि उनीहरू सामान्य जीवन बिताउन सफल भए ।
छारे रोग विशेष प्रकारको नसा रोग हो, जहाँ मस्तिष्कको कुनै एक भाग वा पूरै मस्तिष्कमा अत्यधिक विद्युतीय तरंग उत्पन्न भई बिरामी अचानक बेहोस हुन्छ र सँगसँगै आँखा पल्टाउने, हातखुट्टा दह्रो पारी हल्लिन थाल्छ साथै दाँत बाँध्ने, जिब्रो टोक्ने, मुखबाट फिँज आउने आदि हुन थाल्छ । सामान्य भाषामा यसलाई छारे रोग, मिर्गी वा इपिलेप्सी आदि भनिन्छ । प्रत्येक ब्यथाको प्रकरणलाई ‘फिट्स’ वा ‘सिजर’ भनिन्छ । छारे रोग एउटा सामान्य रोग हो । करिब १ प्रतिशत अर्थात् ३ लाख नेपालीलाई यो रोगको समस्या छ । यस रोग समयमा पहिचान भए उपचारद्वारा सजिलै निको पार्न सकिन्छ ।
संसारले सूचना प्रविधिमा यत्रो फड्को मारिसक्दा पनि हाम्रो मुलुकमा यस रोगसम्बन्धी विभिन्न सामाजिक भ्रम वा अन्धविश्वास विद्यमान छन् । यी भ्रमहरू नै यस रोगको उपचारबाट वञ्चित हुनुको प्रमुख कारण हुन् । छारे रोगी उपचारबाट विमुख हुँदा अकाल मृत्यु वा चोटपटकको सिकार हुने, विस्तारै बौद्विकतामा ह्रास आउने, आफ्नै परिवारबाट तिरस्कृत अवस्थामा बस्न बाध्य हुने जस्ता अवस्था आउने गरेका छन् ।
छारे रोग मेडिकल उपचारबाट सजिलै ठीक गर्न सकिन्छ । पूजापाठ तथा झारफुकमा लागेर समय खेर फाल्नु हुँदैन । यो सरुवा रोग होइन । छारे रोगीलाई आफ्नै परिवार र समाजबाट तिरस्कृत गर्नु हुँदैन । छारे ब्यथा भएका बेला बाँधिएको दाँत खोलाउन खोज्नु हुँदैन, औंला वा चम्चाको प्रयोग गरी यसो गर्न खोजे दुर्घटना निम्तिन सक्छ । मुखमा पानी छ्याप्ने तथा पानी खुवाउने गर्नाले पानी सर्केर बिरामीको मृत्युसमेत हुन सक्छ । गनाउने कुरा जस्तै– प्याज, जुत्ता, मोजा सुँघाएर वा नाक, मुख थुन्नाले यो रोग निको हुन्छ भन्ने भ्रम पाइन्छ तर यसो गर्नाले ब्यथा रोकिनको साटो उल्टै लम्बिन्छ तथा मस्तिष्कमा बढी क्षति गराउँछ ।
करिब ७० प्रतिशत बिरामीमा समस्याको किसिम हेरी एउटा मात्र उपयुक्त औषधिको प्रयोगबाट नियन्त्रित गर्न सकिन्छ तर केही बिरामीमा भने समस्या र असर हेरी एकभन्दा बढी औषधि प्रयोग र शल्यक्रिया आवश्यक पर्न सक्छ ।
डा. कर्ण वरिष्ठ नसा रोग विशेषज्ञ हुन् ।
प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७५ ०७:४०
नसारोगको सचेतनाबाट दीर्घायु
जेष्ठ ६, २०७४ डा. रागेश कर्ण
संसारभरि नै नसारोगीको संख्या धेरै छ र यो दिनानुदिन बढ्दो छ । हामी नेपाली पनि यो समस्याबाट अत्यधिक प्रभावित छौं । नसारोगका विभिन्न घातक परिणाम हुन्छन् । जस्तै– मस्तिष्कघात मृत्यु गराउने रोगहरूमा पहिलो तीनभित्र पर्छ र मृत्युबाट बाँच्ने बिरामीको जीवन पनि अति नै कष्टकर भएर जान्छ ।
छारेरोगले अकाल मृत्यु गराउन सक्छ । दुर्घटनाको जोखिम अधिक हुन्छ, बिरामीको बौद्धिकतामा कमी आउँछ । मस्तिष्क ज्वरो (मेनिन्जाइटिस/इन्सेफलाइटिस) र ब्रेन ट्युमरले अत्यधिक मृत्यु गराउँछ ।
नेपालमा ‘नसा’ भन्ने शब्दले स्नायुतन्त्रका लागिमात्रै नभई शरीरको अन्य भागका लागि पनि प्रयोग भएको पाइन्छ । रक्तनली, लिगामेन्ट, मांसपेशी, जोर्नी इत्यादिको समस्याका लागि पनि बिरामीबाट ‘नसाको समस्या लागेको छ’ भन्ने गरेको सऽन्ने गरिन्छ । यसकारण स्नायऽतन्त्रको समस्या भए पनि अन्य संकायका चिकित्सकहरूसंँग नसारोगीहरू पुग्ने गरेको प्रशस्तै पाइन्छ । स्नायुतन्त्र मानव शरीरको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रणाली हो । मस्तिष्क, मेरुदण्ड र बिभिन्न नसाहरू यस प्रणालीभित्र पर्छन् । मस्तिष्क र मेरुदण्डलाई केन्द्रीय स्नायुतन्त्र भनिन्छ । यसको अरू अंगसँगको प्रत्यक्ष सम्पर्क बिभिन्न नसाद्वारा स्थापित हुन्छ । स्नायुतन्त्रले बिभिन्न अंगका बीचमा समन्वय स्थापित गरी हामीलाई विषम परिस्थितिमा पनि जीवित राख्न मद्दत गर्छ ।
स्नायुतन्त्रको विकृति वा क्षतिले गर्दा लाग्ने रोगलाई नसारोग भनिन्छ । यसका लक्षणहरू, स्नायुतन्त्रमा कहाँ विकृति छ भन्ने कुरामा भर पर्छ । स्नायुतन्त्रको प्रत्यक्ष सम्पर्क अरू अंगसंँग भएकोले अरू अंगसंँग सम्बन्धित लक्षणहरू पनि नसा रोगले गर्दा देखिन सक्छन् । जस्तै– मुटु धड्किनु, सास फेर्न गाह्रो हुनु । तसर्थ यी लक्षणको सही विश्लेषण हुनु र सही रोग (नसारोग वा अन्य अंगसम्बन्धी रोग) पत्ता लाग्न अत्यन्त जरुरी हुन्छ ।
मस्तिष्कघात खराब हावा चलेर वा चिसो लागेर लाग्छ भन्ने अन्धविश्वासका कारण यी बिरामीलाई घरमै झ्याल—ढोका बन्द गरी राख्ने चलन छ, जसले गर्दा बिरामीको समयमा उपचार नपाई मृत्यु हुने सम्भावना बढ्छ । त्यस्तै छारेरोग दैवीप्रकोप वा भूतप्रेतको असरले हुन्छ, यो पूर्वजन्मको फल हो, यस्ता बिरामीसँग बस्नाले वा सँगै खानाले अरू मान्छेलाई सर्छ जस्ता भ्रम पाइन्छ । फलस्वरूप यस्ता बिरामी आफ्नै परिवार वा समाजबाट अपहेलित हुन्छन्, रोगलाई उपचार नगराई लुकाइराख्ने पनि गरिन्छ ।
केही नसारोगका लक्षण
मस्तिष्कघात/पक्षाघात : अचानक शरीरको एक भाग नचल्नु अर्थात कमजोरी हुनु, अनुहार बांगिनु वा आवाज परिवर्तित हुनु ।
छारेरोग/मिर्गी : अचानक बेहोस हुनु, हातखुट्टा कडा भई १–२ मिनेट हल्लिनु, मुखबाट फिँज आउनु ।
टाउको दुखाइ : टाउको दुख्नु, पोल्नु, भारी हुनु ।
न्युरोपेथी : शरीरका कुनै भागमा वा चारैवटा हातखुट्टा दुख्नु, पोल्नु, झमझम गर्नु वा लाटो हुनु ।
पारकिन्सोनिजम : हातखुट्टा कडा हुनु, बिरामी शिथिल हुँदै जानु, हातखुट्टा हल्लिराख्नु ।
एटेक्सिया : हुत्तिनु, हिँड्दा सन्तुलन नहुनु ।
मेनिन्जाइटिस : ज्वरो आउनु, टाउको दुख्नु, वान्ता आउनु, बेहोस हुनु, होस हराउँदै जानु ।
ब्रेन ट्युमर : टाउको दुख्नु, मस्तिष्कघातजस्तै शरीरको एक भाग नचल्नु, छोप्ने व्यथा हुनु, बोलीमा परिवर्तन आउनु इत्यादि ।
जीवनशैली परिवर्तन वा अन्य केही कारक पहिचान गरी त्यसको समयोचित उपचारबाट धेरैजसो नसारोग लाग्नबाट सजिलै बँच्न सकिन्छ वा त्यसको दुष्परिणामलाई न्युनीकरण गर्न सकिन्छ । जस्तै– चुरोट, सुर्ती र अत्यधिक मदिरा सेवन बन्द, नियमित व्यायाम, फास्टफुट र जंकफुडको सेवन कम, स्वस्थ र सन्तुलित आहार सेवन गर्नाले साथै उच्च रक्तचाप, मधुमेह, उच्च कोलेस्टेरोलको सही पहिचान र उपचारले मस्तिष्कघातबाट बँच्न सकिन्छ । त्यस्तै छारेरोगका बिरामीले यी परिस्थिति (जस्तै– अनिद्रा, धेरै बेर भोको पेट, तनाव, अत्यधिक चम्किने प्रकाश र मदिरा सेवन इत्यादि) बाट जोगिनाले छारेको व्यथा दोहोरिने सम्भावना घटेर जान्छ । त्यस्तै छारे व्यथा भए यी प्राथमिक उपचारमा ध्यान दिए बिरामीको ज्यान बचाउन सकिन्छ । बिरामीको नाक थुनिदिने, मुखमा पानी हाल्ने, जुत्ता सुंँघाउने, मुखमा चम्चा वा औंला हाल्ने इत्यादि गर्नु हुँदैन । बरु वरिपरिको दुर्घटना गराउने सामान हटाइदिनुपर्छ, घाँटी वरिपरि कसिने खालको लुगा छ भने हटाउनु वा खुकुलो पार्नुपर्छ । हल्लिन छाडेपछि बिरामीलाई कोल्टो फर्काएर राख्नुपर्छ ।
नसारोग उपचारका बाधा
नसारोगसम्बन्धी जनचेतनाको कमी हुनु, समाजमा यसका सम्बन्धमा प्रचुर मात्रामा भ्रम वा अन्धविश्वास रहिरहनु, मुलुकमा नसारोग विशेषज्ञको अति न्युन संख्या हुनु र यसका उपचार विधि वा विशेषज्ञहरू केन्द्रीकृत वा सहरीकृत मात्रै हुनु नसारोग उपचारका बाधा हुन् । जनचेतना जगाउने खालका कार्यक्रम, यसको उपचार जुन स्तरको स्वास्थ्यकर्मी वा चिकित्सकबाट सुरु भए पनि विशेषज्ञसँंगको परामर्शको लागि उचित तथा सन्तुलित पठाइदिने प्रणाली नसारोगीहरूको सम्पूर्ण तथा सफल उपचारका लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो । नसारोगमा गैरऔषधीय उपचार पनि त्यतिकै आवश्यक हुन्छ, जस्तै– जीवनशैली परिवर्तन, फिजियोथेरापी, ध्यान इत्यादि । यी सबै कुराको सचेतनाले मात्र यो समस्याको भारलाई कम गर्न सकिन्छ ।
डा. कर्ण नसारोग विशेषज्ञ हुन् ।
प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७४ ०९:१४